प्रधानमन्त्रीज्यू, पानी जहाज र रेल चाहिँदैन, लिपुलेक र कालापानी जोगाउनुस् -
प्रधानमन्त्रीज्यू, पानी जहाज र रेल चाहिँदैन, लिपुलेक र कालापानी जोगाउनुस्
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रवादी छवि बनाएका नेतामा पर्छन् । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय नाकाबन्दीको डटेर सामना गरेका ओली अहिले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाभिमान रक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । भारतले नेपाली सिमाना मिच्दै आएको नयाँ घटना होइन, सुस्तादेखि तिलाठीसम्म नेपाली भूभाग चिच्दै आएको छ । तर, यसपटक भने उसले नेपाली सिमानामात्रै मिचेन, हालै बनाएको आफ्नो नक्सामा नेपालको ठूलो भूभागलाई आफ्नोमा पारेको छ । नक्सा सार्वजनिक भएर सर्वत्र विरोध भइरहँदा सरकारको तर्फबाट कुनै धारणा आइसकेको छैन । यसले भारतविरोधी मात्रै होइन ओली सरकारविरोधी आवाज उठ्ने देखिएको छ ।
हर नागरिकले विकास र सुविधा भन्दा राष्ट्रिय स्वाभिमान चाहन्छ । यसको उदाहरण हो, २०७२ सालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीमा सास्ती खेपेर तत्कालीन ओली सरकारलाई भारतसँग नझुक्न गरेको सहयोग । लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको अतिक्रमित विशाल नेपाली भूमिलाई समेटेर आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेको भारतले नेपालको स्वाभिमानमाथि प्रहार गरेको छ । जसको सामना गर्न ओली सरकार अग्रसरमात्रै होइन नक्सा सच्याउन भारतलाई बाध्य पार्न नेपाल सरकार र जनता सक्षम हुनुपर्छ । विकास र समृद्धिको नारा र कामले राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई बचाउन सक्दैन ।
भारतले नेपाली सीमा मिच्दा सरकारीस्तरबाट कडा प्रतिवाद नहुँदाको परीणाम अहिले देखिएको हो । यसबेला पनि चुप लागे भारतले नेपालमाथि जस्तो सुकै कदम चाल्न हिच्किचाउने छैन । यसर्थ प्रधानमन्त्री ओलीबाट यसको समाधान खोजेका छन्, जनताले । प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो वास्तविक राष्ट्रवादी छवि देखाउने अवसर पनि हो ।
नेपालको भूमि समेटेर भारतले नक्सा बनाएकोप्रति काठमाडौंस्थित नेपालका लागि भारतीय राजदूतलाई बोलाएर अहिलेसम्म स्पष्टीकरण सोध्ने हिम्मत ओली सरकारले किन गर्न सकेको छैन ? यसबारे तत्काल भारतको आधिकारिक धारणा माग्दै नक्सा सच्याउन निर्देशन दिनुपर्ने ओली सरकारले हालसम्म विरोधमा एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको छैन ।
भारतको सहयोगमा पानी जहाज र रेल चलाउनु भन्दा आफ्नो भूमि रक्षा गर्नेतर्फ ओली सरकार नलाग्ने हो सरकारविरोध भावना बढ्न सक्ने देखिन्छ । यसतर्फ बेलैमा सरकार तथा सम्बन्धित् निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
एउटा दलित सँग प्रेम गर्ने सहास भएकी बालिकाको चरि’त्र ह’त्या गरेर न्याय हुन्छ ? – रेखा